Ambatomaro: voavaha ny olan’ny rano - ewa.mg
News - Ambatomaro: voavaha ny olan’ny rano
Misitraka rano madio ny mponina eny
amin’ny Boriborintany V ka nijery izany ny minisitra
Rakotovelomanantsoa Voahary sy ny avy amin’ny Jirama, ny talata
Roa taona tsy nahazo rano ny
mponina fa ankehitriny kosa, nanaporofo izy ireo fa tonga soa
aman-tsara any an-trano ny rano. 10.000 ireo olona tsy nahazo rano
satria tsy manosika ny tao Mandroseza. Nanomboka ny volana jolay
teo anefa efa mahazo rano ny fokontany maro.
Ambohibary, Nanisana, Ambohimirary,
Anjanahary sisa no tsy mandeha ny rano, hoy ny
solombavambahoaka. Mbola hisy ny fanatsarana toy ny
fanavaozana ny fantsona, izay tena efa antitra. Tokony hahay
hitsitsy rano sy hanavao ny kojakoja famatsiana rano ihany koa mba
tsy hahavery fotsiny ny rano, hoy hatrany ny minisitra,
Ny tobin-drano eny Ampirika
mamoakatra rano 100m3 isan’ora mamatsy kaominina telo manodidina.
Ny ao Mandikanamana dia mifameno amin’ny rano ao Amoron’ankona ka
nanampy 100m3 isan’ora ihany koa izany hanomezana fahafaham-po
hatrany ny mpanjifa. Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny
velirano faharoa an’ny filoham-pirenena, rano ho an’ny rehetra ny
ezaka, hoy ny minisitra.
L’article Ambatomaro: voavaha ny olan’ny rano a été récupéré chez Newsmada.
CSB 40 eto Antananarivo : olona 13 590 nahazo tolotra fahasalamana
Nentanina hanatona eny amin’ny CSB akaiky azy ny olona tsy salama ka miahiahy ho mitondra ny tsimokaretina Covid-19 hanafainganana ny fandraisana an-tanana, araka ny toromariky ny filoha. CSB 40 eto Antananarivo ny nisahana ny asa ka mitotaly 13 590 ny isan’ireo olona nisitraka ny tolotra fahasalamana maimaimpoana eo anivon’ny to­bim-pahasalamana fototra, ny 14 ka hatramin’ny 20 jolay teo. Tafiditra amin’ny tolotra no­mena ireo tsy salama ny vitamine C sy ny Magné B6 ary ny paracétamol mampidina ny hafanana. Teny anivon’ny 18 CSB eto an-dRenivohitra, na­ha­tratra 11 212 n nahazo ny fanafody maimaimpoana rehefa nanatona teny. 1 144 kosa ireo nisitraka izany tao Atsi­mondrano tamin’ny CSB 17 ary 1 184 ny tao Avaradrano teny anivon’ny CSB dimy, araka ny tatitry ny sampandraharaha fampiroboroboana ny fahasalamana eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana.Vonjy A.L’article CSB 40 eto Antananarivo : olona 13 590 nahazo tolotra fahasalamana a été récupéré chez Newsmada.
CHRR Antsohihy: mandrahona hihetsika ny mpiasa
Mandrahona hanao hetsika fanairana ny mpiasan’ny fahasalamana ao amin’ny foibem-paritr’i Sofia ho fitakiana ny fanalana ny talem-paritry ny fahasalamana amin’ny toerany. « Sakana ho an’ny fampandehanana ny asa sady manapotika ny tetikasa natao ho an’ny vahoaka ny fisian’io tompon’andraikitra io », araka ny taratasy nalefan’ny mpiasa avy tao amin’ny Centre hospitalier de référence régionale (CHRRR) Antsohiny, nisolo tena ireo namany, tany amin’ny sampandraharahan’ny fitsirihana ny asam-panjakana (Inspection d’Etat), ny 30 oktobra teo. Tsy mbola nisy tohiny izany ka nahatonga azy ireo haka fanapahan-kevitra hanao hetsika. Nohitsin’izy ireo fa efa ratsy fiasa io olona io fony izy « médecin-inspecteur » tao Antsohihy, saingy mirehareha noho ny fananany mpiaro azy. “Mpanampatra fahefana sady ratsy fitantanana io tale io”, hoy ireo mpiasa. Santionany nampahafantarina ny mpisafon-draharaham-panjakana ny fivarotany fiaram-panjakana roa, nolazainy fa simba. Ny fanagizany ny moto avy amin’ny tetikasa Mahefa, ny fitazonany ny famatsiam-bola 13 tapitrisa Ar avy tamin’ny tetikasa Gavi sy ny tsy nampiasany amin’ny tokony ho izy ny vola efatra hetsy sy roa tapitrisa Ar tamin’ireo fanaovana vaksiny faobe nifandimby ka nampitaraina ireo “superviseurs”. Eo koa ny fanilihana mpiasa tsy mitovy fijery aminy… Efa nanao tatitra amin’ny minisitera ny mpiasa, saingy tsy nohenoina. Hiroso amin’ny dingana henjankenjana ny mpiasa ka izao miala nenina farany izao, araka ny fanambarana ihany. Randria L’article CHRR Antsohihy: mandrahona hihetsika ny mpiasa a été récupéré chez Newsmada.
Hatao fitiliana ADN ilay tady nanakendana azy… : nametraka fitoriana any Frantsa ny fianakavian’i Danil Radjan
Mivoatra ilay “Raharaha Danil Radjan”! Tafapetraka ao amin’ny fampanoavana ao Paris ny fitorian’ny fianakavian’i Danil Radjan. Ny mpisolovava frantsay Nicolas Goutx no niandraikitra ny fanaterana izany sady miaro ny zon’ny fianakavian’i Danil Radjan, amin’ity raharaha ity. “Mizaka ny zom-pirenena frantsay i Danil Radjan sy ny vadiny. Noho izany, zon’ny fianakaviana tanteraka ny manetsika ny fitsarana frantsay amin’ity raharaha ity”, hoy izy, tamin’ny mpanao gazety tany Frantsa, omaly. Nohamafisiny fa miandrandra fiaraha-miasa matotra amin’ny fitsarana malagasy izy, indrindra amin’ny lafiny fanadihadiana avy amin’ny alalan’ny kaomisiona iombonana. Nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety, koa omaly ireo mpisolovava malagasy an’ny fianakavian’i Danil Radjan. Nahitsy ny Me Miadana Ratsimba nilaza fa nanao fanohanana satria tsy afa-po tamin’ny tsy nampidirana am-ponja an’ilay vazaha tompona orinasa sivily misahana ny fiambenana. Ahina mafy ho atidohan’izao vonoan’olona mahatsiravina izao izy io. “Hanadihadiana lalina isika satria manana ny porofo ary efa miara-miasa amin’ny manam-pahaizana sy ny fitsarana frantsay. Hisy ny fitiliana AND ilat tady nanakendana an’i Danil io”, hoy izy ireo. Nilaza ny tsy hanaiky amin’ny fahamarinana ireo mpisolovava.Jean ClaudeL’article Hatao fitiliana ADN ilay tady nanakendana azy… : nametraka fitoriana any Frantsa ny fianakavian’i Danil Radjan a été récupéré chez Newsmada.
Tafika mampita vaovao
Notanterahina, omaly, teny amin’ ny Cemes Soanierana ny fanomezana mari-pakasitrahana ireo miaramila avy amin’ny Tafika sy Zandary nanaraka fiofanana natao teny an-toerana momba ny fifandraisan’ny miaramila amin’ny mpanao gazety nandritra ny andro vitsy izay. Miaramila avy any Etazonia no nampanao ity fiofanana ity. Taorian’izao dia nilaza ny amin’ny tokony hifampi- resahan’ny mpanao gazety sy ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny miaramila ny minisitry ny Fiarovam-pirenena. L’article Tafika mampita vaovao est apparu en premier sur AoRaha.
Asan-dahalo tao Maevatanàna : voafandrika omaly i Talatabe
Voasambotry ny mpitandro filaminana, omaly tao amin’ny tanànan’Ambalaranobe, kaominina Maeva II, distrikan’i Maevatanàna, i Talatabe. Tsy nikely soroka ny miaramila fa nanao ny fomba rehetra nahafahana nisambotra azy. Volana maromaro ny nikarohana ity dahalo raindahiny ity, tra-tehaka ihany ny tenany izay mpampihorohoro sy mpangalatra omby ao an-toerana. Noho ny fitoriana maro sy ny heloka efa maha oaroiroy an’i Talatabe, nanao vela-pandrika ny miaramila ao Ambalaranobe ka nahitam-bokany avy hatrany. Tsy afa-nitsoaka fa noraisim-potsiny ity dahalo raindahiny ity. Niaiky ny heloka vitany ity farany ary efa natolotra ny zandary ao Maevatanàna. Mitohy kosa anefa ny asa ho an’ny miaramila ary nanamafy izy ireo fa tsy ho afa-bela ireo mbola minia mitondra fampihorohorona ao an-toerana.TsiferanaL’article Asan-dahalo tao Maevatanàna : voafandrika omaly i Talatabe a été récupéré chez Newsmada.
Mpianatry ny ENS: haseho an-tsehatra ny “Vakivakim-piainana”
Anisan’ny fandaharam-pianarana eny amin’ny lisea ny boky “Vakivakim-piainana” nosoratan’Iharilanto Patrick Andriamangatiana. Harindran’ny mpianatry ny ENS, sampana teny anglisy, izy amin’ity indray mitoraka ity…Hoentina an-tsehatra etsy amin’ny Plaza Ampefiloha, anio talata 19 janoary manomboka amin’ny 2 ora tolakandro, ny “Vakivakim-piainana”, nosoratan’Iharilanto Patrick Andriamangatiana. Hetsika karakarain’ny eo anivon’ny ENS (Ecole normale supérieure), ao amin’ny rantsam-pampianarana anglisy (formation d’enseignants d’anglais), kilasy fahatelo, andiany Bountiful cohort, izy ity. “Taranja iray hanofanana mpianatra ho mpampianatra ny teatra, koa nosafidina amin’ity indray mitoraka ity ny hiantsehatra amin’ilay boky Vakivakim-piainana, ary holalaovin’ireo mpianatra amin’ny sampana teny anglisy sy ny departemanta samihafa izany, izay manampy amin’ny fanatontosana azy”, hoy Razafindrabe Voahirana Nirina, mpampianatra mpikaroka, miandraikitra ny fampianarana teatra.Ny boky “Vakivakim-piainana” izay tafiditra ao anaty fandaharam-pianaran’ny ankizy eny amin’ny lisea, indrindra ny kilasy famaranana. Raha fintinina ity boky “Vakivakim-piainana” ity, ahitana fizarana efatra: Tsikalakalam-pihavanana, Tsikalakalam-pitia, Tsikalakalam-bola, ary Tsikalakalan’olona. Maro ny tara-kevitra ao anatiny, toy ny fandrika mpahazo ny tanora, ny fahantrana, ny fahamarinana, ny vintana sy ny anjara, ny harena sy ny heriny… Anisan’ny mpandray anjara fototra nianjadian’ny olana maro teo amin’ny fiainana i Tsiry ka nisy mihitsy ny fampidirana am-ponja azy. Antenaina hitondra soa sy hoenti-manitatra ny fahalalan’ny rehetra, indrindra ny mpianatra, ny fijerena azy ity.NarilalaL’article Mpianatry ny ENS: haseho an-tsehatra ny “Vakivakim-piainana” a été récupéré chez Newsmada.
Ahazoany hatramin’ny 10 tapitrisa Ar: sarona ilay ramatoa manakarama mpivarotena amin’ny “internet”
Noraisim-potsiny! Saron’ny polisy avy ao amin’ny Service des enquêtes spécialisées, teny Ilafy, afakomaly, ny ramatoa iray vao 25 taona, voarohirohy ho manakarama vehivavy maromaro hivaro-tena ao anaty “internet”.Raha ny tatitra nampitain’ny polisy tao anaty « facebook » no nahitan’ireo vehivavy hiasa ao aminy ireo. Manana tranonkalam-pifandraisana (site web) hifandraisany amin’ireo vazaha ilay ramatoa ka ao izy no misera amin’ireo vazaha mpanam-bola any ivelany ary mandefa ny sarimihetsik’ireo vehivavy mivantana amin’izay mandefa vola aminy. Nambarany nandritra ny famotoran’ny polisy fa ny vehivavy iray dia hahazoany vola 1 800 000Ar hatramin’ny 10 tapitrisa Ar satria manao izay tian’ilay vazaha atao ireo tovovavy malagasy na tsy mifanaraka amin’ny hasina maha olombelona aza izany.Manome fahafinaretana 15 sy 30 minitra ireo vazaha…Ireo tovovavy manao izany kosa milaza fa lehilahy dimy hatramin’ny 10 isan’andro eo ho eo no omen’izy ireo fahafinaretana maharitra 15 minitra hatramin’ny 30 minitra eo. Mikarama roa hetsy Ar eo ho eo ireto tovovavy ireto isam-bolana ka 19 hatramin’ny 24 taona ny salan-taonan’ireo ankizivavy mpampanofa vatana ireto. Indroa isan-kerinandro ihany izy ireo no afaka mody any an-tranony na dia mbola misy aza ny manohy ny fianarany. Taorian’ny fikarohana nataon’ny polisy anefa dia tratra ihany izy ka ankzivavy miisa valo no tratra tao an-trano niaraka tamin’ny fitaovana hifandraisana amin’ny vahiny toy ny ordinatera isan-karazany sy “modem” samihafa ary ireo fitaovana hampiasain’ireo vehivavy toy ny filahiana artifisialy (sextoys). Nalefan’ny polisy nody avy hatrany ireo vehivavy tratra tao aminy.Jean ClaudeL’article Ahazoany hatramin’ny 10 tapitrisa Ar: sarona ilay ramatoa manakarama mpivarotena amin’ny “internet” a été récupéré chez Newsmada.
Incendie à Anosibe : 36 cases parties en fumée, 55 familles sinistrées
Hier, tôt dans la matinée, les habitants du fokontany d’Anosibe ont été pris de panique. Vers 7 heures 30 minutes, un secteur de la localité a pris feu. Un grave incendie s’est déclaré dans le quartier. L’endroit étant isolé et difficile d’accès en voiture alors qu’il abrite des centaines de population, les sapeurs-pompiers ont eu du mal à y accéder. A cause du retard pris dans intervention des soldats du feu, l’incendie a très vite pris de l’ampleur d’autant plus que la promiscuité entre les cases a favorisé une propagation rapide des flammes. Bilan du drame: 36 maisons d’habitations et de commerce sont parties en fumée. Ce qui laisse 55 familles sinistrées. Les voisins se sont donné la main pour sauver tout ce qui pouvait l’être mais cette entraide n’a pas empêché le brasier de faire d’importants dégâts. En réalité, cet incendie a eu lieu dans un quartier reculé du fokontany d’Anosibe pour ne pas dire qu’il se trouve dans un endroit hors de la carte de ce fokontany. Il sied de rappeler que ce genre d’incendie dans les bas quartiers de la capitale est devenu fréquent depuis quelques mois. C’est malheureux d’entendre que la majorité des familles victimes sont des marchands opérant au marché d’Anosibe et de Namontana, des marchés de la Commune urbaine d’Antananarivo. En difficulté, ces sinistrés qui affirment avoir toujours confiance aux autorités, notamment à la commune urbaine d’Antananarivo, souhaitent avoir l’appui et le soutien des autorités concernées. La cause de ce drame reste encore à déterminer. T.M. L’article Incendie à Anosibe : 36 cases parties en fumée, 55 familles sinistrées est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Incendie à Anosibe : 36 cases parties en fumée, 55 familles sinistrées a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Rafaramalala Saholinirina ny tena anarany, saingy nosafidiny manokana ho sonian’ireo asa sorany ny hoe Fenotsiky. Mpampianatra sady mpanoratra avy any amin’ny faritra Alaotra Mangoro any i Fenotsiky, mpikambana ao amin’ny Havatsa Upem, araka ny nambarany. Na efa renim-pianakaviana aza izy, mbola ao anatin’ny fahatanorana tanteraka. Na eo aza izany fisandratany izany, azo lazaina ho dingana lehibe no efa vitany eo amin’ny tontolon’ny asa soratra. Lehibe indrindra amin’izany ny “Rango-tsento”, boky amboaran-tononkalo voalohan’i Fenotsiky. Ahitana sanganasa miisa 111 izy ity ary nivoaka tamim-pomba ofisialy, ny 17 novambra teo, tamin’ny alalan’ny hetsika miavaka, tetsy amin’ny Cemdlac Analakely. Raha fintinina, soratra anehoana aingam-panahy, mifantoka amin’ny fitiavana amin’ny lafiny rehetra (tanindrazana, olon-droa, tontolo iainana, sns), no atosaky ny mpanoratra, ao anatin’ity angon-tononkalony voalohany ity. Tsy vitsy ny mpanakanto maniry ny hamoaka zavatra toy izao, saingy eo ny sakana samihafa, tsy ahafaha-mikofoka. Ho an’i Fenotsiky kosa, hery manosika hioitra izany sakana izany ny fahatsapana fa mihamaro ny mankafy ny asa soratra, indrindra ny aty an-dRenivohitra. Hany ka nivoaka soa aman-tsara ny “Rango-tsento”, nosoratana ho lovan’ny taranaka, araka ny nohamafisiny. Landy R.L’article Asa soratra: namoaka ny “Rango-tsento” i Fenotsiky a été récupéré chez Newsmada.
Fanavaozana lalàna: hojerena ny sosialin’ny mpiasa
Ampifanarahana ny vanim-potoana fa efa lany andro. Dinihina mandritra ny efatra andro etsy Ankorondrano ny fanavaozana ny lalàna mifehy ny asa, mialoha ny handaniana izany eny amin’ireo Antenimiera roa tonta. Miara-mikaondoha amin’izany ireo teknisianina, ahitana ny solontenan’ny mpiasa, ny mpampiasa ary ny fanjakana. Anisan’ny niatrika izao fihaonana izao ny ministry ny Asa, Ranampy Giséle. Hojerena amin’izany ireo pitsopitsony, mbola tokony hahitsy sy hampidirina ao anatin’ity lalàna mifehy ny asa vaovao ity.Andrasan’ireo vondron’ny mpampiasa ny hisian’ny fifanakalozan-kevitra eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa misimisy kokoa ao anatin’ity lalàna ity. Hojerena koa ny lalàna mifanandrify amin’izy ireo raha efa tena lany andro izany ho an’ny amin’izao fotoana izao. Ho an’ny mpiasa kosa indray, ny hijerena manokana ao anatin’ity lalàna ity ny sosialin’izy ireo.Asa mendrika ho an’ny rehetraEtsy andaniny, nametraka kosa ny fanjakana fa tsy maintsy atao ny hahavitan’ity lalàna ity, mba hizorana amin’ny fametrahana ny asa mendrika ho an’ny rehetra. Eo koa ny fijerena ny tombontsoan’ny mpiasa sy ny mpampiasa. Tsiahivina fa ny taona 2004 no nisy fanamboarana farany ity lalàna ity.Synèse R.L’article Fanavaozana lalàna: hojerena ny sosialin’ny mpiasa a été récupéré chez Newsmada.